भिम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, प्रधानमन्त्रीज्यू देशलाई आमा भन्छौं, कसरी का’टेर खान सक्नुभो ? – " सुलभ खबर "
भिम रावलले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे, प्रधानमन्त्रीज्यू देशलाई आमा भन्छौं, कसरी का’टेर खान सक्नुभो ?
काठमाडौं, १४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जन्मदिनमा जन्मस्थान पुगेर केक खाएको विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुनै प्रतिकृया दिएका छनैनन् । आफ्नो जन्मस्थानमा जन्मदिन मनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुरुप तेह्रथुममा उनको धुमधामका साथ जन्मदिन मनाइएको हो ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले अन्य विकासका काम पनि गरेका छन् । आफ्नै पुख्र्यौली जमिन कृषीको विकासका लागि दिने निर्णय गरेका छन् । मदनभण्डारी जन्मस्थान र तेह्रथुम जोड्ने सडकको सिलान्यास गरेका छन् । तर उनले गरेका सकारात्मक कामको भन्दा केकको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै टिका टिप्पणी भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरु पनि टिप्पणीमा उत्रिएका छन् । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज भीम रावलले एक दिन ढिलो गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जन्म दिनएको शुभकामना दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जन्मथलो तह्रथुममा पुगेर धुमधामका साथ आइतबार जन्मोत्सव मनाए पनि नेता रावलले भने सोमबार मात्र ट्वीटरमा जन्मदिनको शुभकामना दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तेह्रथुममका धुमधाम साथ जन्मदिन मनाएका तस्वीर सार्वजनिक भएपछि आलोचना गर्नेहरुमा रावल पनि थपिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको जन्मदिनको केकमा नेपालको नक्सा अंकित गरिएको थियो । नेपालको नक्सा भएको केक का टेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भएको हो ।
यस विषयमा नेता रावलले पनि केही गल्तीहरु औंल्याएका छन् । उनले केक का ट्ने नेपाली संस्कृति नभएको भन्दै नेपालको नक्सासहितको केक का टेकोमा प्रश्न उठाएका छन्। यस्तै समृद्धिका लागि विदेशीसँग हात पसारिरहेका बेला ठूलो रकम जन्म दिनमा खर्च गर्नु पनि ठिक नभएको उनले लेखेका छन् । नेता रावलले पार्टीको निर्णयअनुसार त यस्तो तामझामका साथ जन्म दिन मनाउनै नहुने बताएका छन्।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्
‘प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जन्मदिनको शुभकामना ! यो मनन गर्नु भने उचित हुन्छ–केक का ट्ने नेपाली मौलिक सँस्कृति होइन, देशलाई हामी आमा भन्छौं, का टेर खान मिलेन, अँझ ‘समृद्धि’ का लागि संसारका सामु हात पसारिरहेको बेला अति ठूलो रकम खर्चेर जन्मदिन मनाउन मिल्दैन। पार्टी निर्णयले झनै मिल्दैन।’